Qatarta Fahad maanta ayey qabasho leedahay | KEYDMEDIA ONLINE
Qatarta Fahad maanta ayey qabasho leedahay
Xiritaanka Fahad Yaasiin waa tilaabo loo qaaday jihadii saxda aheyd, Fahad wuxuu lid ku yahay amniga dalka, tani waa falaanqeyn kooban oo uu diyaariyay tifaftiraha Keydmedia Online.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xiritaanka Fahad Yaasiin ee dalka Jabuuti waa tilaabo loo qaaday jihadii saxda aheyd sababtoo ah Fahad waa ninkii ka dambeeyay qulqulatooinkii ka dhici jiray Caasimadda, oo ay ka mid tahay dilalkii qorsheysnaa iyo afduubkii lagu qaarajiyay Ikraan Tahliil.
Xukuumadda RW Maxamed Xuseen Rooble waxaa la gudboon arrimaha soo socda si dalka looga baajiyo qalalaase siyaasadeed iyo mid amni:
In dowladda Jabuuti laga codsado sidii Fahad Yaasiin loo heyn lahaa, inta laga keenayo cadeymaha dambiyadii uu ka galay qaranka, oo iskugu jira dilal qorsheysan iyo kuwa la xiriira argagixiso oo uu gacan saar toos ah la lahaa afartii sano ee lasoo dhaafay.
In xukuumadda faderaalka ay gacan ku siiso qoyska Ikraan Tahliil sidii ay gal dacwad uga furan lahaayeen dalka Jabuuti, si kiiska iyo dacwadda dambiga halkaas looga furo, isla markaana dalka uu uga baaqdo dhiig badan oo u daadan lahaa Fahad dartiis.
Waxaan ognahay in ay jiraan wali ciidamo ka amarqaata Fahad oo uu soo dhisayay afartii sano ee lasoo dhaafay, kuwaas oo u bareeri kara dambiyo horleh in ay ka geystaan Soomaaliya. Sidaas darteed, waa in xukuumadda ay kala hadashaa beesha caalamka sidii gacan loogu siin lahaa xayiraadda iyo sharci-marinta shaqsiyaadka caqabada ku ah geedisocodka nabadeynta iyo xasilinta Soomaaliya.
Maadaama uu Farmaajo ku eedeysan yahay Qaswade, sida ay qortay International Crisis Group, waxaa lama huraan ah in xoogga la saaro dadka garabka ku siiya qaska iyo fowdad, kuwaas oo uu Fahad Yaasiin ugu horeeyo.
Waa in xukuumadda ay kala hadasho dowladaha Qatar iyo Turkiga sidii ay arrinta Fahad Yaasiin uga gaabsan lahaayeen, loona tusi lahaa in uusan sabab u noqon kala fogeynta xiriirka dalalka walaalaha ah. Arrintan waxay muhiim u tahay in damaanad-qaad la siiyo dowladahaas maadaama uu Fahad Yaasiin ka tirsan yahay sirdoonka Qatar oo uu kala shaqeeyo arrimaha Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, xukuumadda Federaalka ee uu horjoogaha ka yahay RW Rooble waxaa looga fadhiyaa in ficilo la taaban karo ay ku dhaqaaqdo, kuwaas oo soo afjaraya dhibaatooyinka docfaruurka ku ah geedisocodka doorashooyinka ee uu madaxweynihii hore maleegayo.
Cabdiraxmaan Rooje - KEYDMEDIA ONLINE